Gudniinka hablaha waxaa la mamnuucey bilowgii siddeetameeyadii - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabar sii jeedda oo aan doonayn in wejigeeda la arko. Sawirle: Qaas/privat
Gudniinka hablaha waxaa la mamnuucey bilowgii siddeetameeyadii
La daabacay måndag 22 februari 2016 kl 14.27
Kummanaan haween ah ee ku dhaqan dalkan Sweden ayey la soo gudboonaadaan caqabadaha la xiriira gudniinka hablaha iyo guurka khasabka ah, kuwaasina oo ah falal xeerka jebineya, hase yeeshee aaney inta badan maxkamad la hor keenin.
Ciidanka ammaanka laantiisa qaranka ee magaciisa loo soo gaabiyo NOA ayaa iminka ku talo jira sidii uu wax uga ogaan lahaa sababta dhalisa middaa. Nina Gual, ahna sarkaalad ka howl-gasha ciidanka ammaanka ayaa hoggaamin doonta baaritaankaa:
- Iminka howshaa ayaannu dardar gelin doonnaa annagoonna dib u eegis ku sameeyn doonna dhammaan kiisaska la xiriira guurka khasabka ah iyo gudniinka hablaha lagula kaco iyo weliba sidii guud ahaan sawir guud looga heli lahaa dhammaan falal-dembiyeedyada la xiriira guurka khasabka ah.
Xeerka mamnuucaya gudniinka hablaha ayaa dalkan ka hir-galay bilowgii sannadihii siddeetameeyadii, hase yeeshee illaa hadda lagu guuleeystay in maxkamad la soo taago, isla-markaana xukun lagu rido laba ruux oo keliya. Sannadkii 2014 ayuu hir-galay xeerka mamnuucaya guurka khasabka ah, welise aan cid loo hor-keenin maxkamad.
Laanta qaranka ee ciidanka ammaanka NOA oo kaashaneeysa khubaro ka socota hayad-goboleedka Östergötland iyo xeer-ilaaliye ey baaritaan ku sameeyn doonaan howlaha loo baahan yahay sidii maxkamad loo hor-keeni lahaa, sida ay sheegtay Nina Gual:
- Qariidadeyn lagu sameeyey waxaa lagu ogaadey iney qiyaastii tiro hablo ah oo gaarsii-san 8.500 ey ka welwel-san yihiin in aaney dooran karin saaxiibka ey doonaan. Haddii aaney jirin kiisas maxkamad la hor keeney waxaa marka noo muuqata inay meeli wax ka khaldan yihiin. Waana midda aannu dooneyno sidii aan wax uga ogaan laheyn sababaha ugu wacan, sida ay sheegtay Nina Gual, kana mid ah saraakiisha ciidanka ammaanka, isla-markaana hoggaamn doonta baaritaanka falal dembiyeedyada la xiriira gudniinka hablaha lagu sameeyo iyo guurka khasabka ah iyo sababta tiro intaa ka badan aan maxkamad loo hor keenin illaa iyo hadda.